Inona no ho hita ao an-tanànan'i León | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita ao León
La renivohitr'i Castilla y León dia manolotra zavatra betsaka ho hitantsika fialan-tsasatra. Tanàna manana tanàna tranainy tsara izy izay milaza amintsika izany tantara rehetra izany, ankoatry ny fananany katedraly malaza. Tanàna nitombo nandritra ny taonjato maro izy noho ny maha-fifandraisana azy tany avaratra. Noho ny fiakaran'ny Camino de Santiago dia nanjary toerana fizahan-tany be mpizaha tany ihany koa izy io isan-taona.
Ho hitantsika eo inona ny hevi-dehibe fitsidihana ao an-tanànan'i León. Tanàna miavaka amin'ny tanànany taloha nefa koa amin'ny gastr gastrika sy ny atmosfera. Toerana mety amin'ny fialantsasatra faran'ny herinandro izy io, satria azo tsidihina haingana ao anatin'ny roa andro.
1 Katedraly Leon
2 Lapan'i Guzmanes
3 Trano Booties
4 Convent an'i San Marcos
5 Fiangonana Collegiate of San Isidoro
6 Ny MUSAC
7 Majistra Plaza
8 Humid manodidina
Ny Katedraly León, fantatra koa amin'ny anarana hoe Bella Leonesa dia iray amin'ireo tsangambato lehibe indrindra. Mandray anjara Camino de Santiago ary nambara ho Monam-pirenena tamin'ny 1844, izy no voalohany tao amin'ny firenena. Izy io dia natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX teo ambonin'ny tampon'ny fandroana romana tamin'ny fomba Gothic frantsay tena tsara. Ity fomba ity dia mampiseho silhouette namboarina izay manampy amin'ny famoahana ny rindrina mba hahafahana mampiditra ireo varavarankely fitaratra miloko tsara sy varavarankely rose izay fanangonana lehibe indrindra any Espana. Ny lafiny farany dia ny maivana, na dia ao anatin'ny katedraly aza, izay mahavariana ny haben'ny loko ao amin'ireo varavarankely fitaratra ireo.
El Akaikin'i Casa Botines i Palacio de los Guzmanes, manamora ny fitsidihana azy roa. Ity lapa Renaissance ity dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary naorin'ny iray amin'ireo fianakaviana manan-danja indrindra ao an-tanàna. Amin'izao fotoana izao dia toeran'ny filankevitra provinsialy izy io. Any amin'ny Plaza San Marcelo no misy azy ary ao anatiny dia ahitanao patio taloha tsara tarehy misy fantsakana eo afovoany.
Ity trano ity dia iray amin'ireo vitsy sangan'asa izay nataon'i Gaudí tany ivelan'i Catalonia. Izy io dia tranobe neo-Gothic manaitra miaraka amina fomba maoderina. Mety ho sarotra amintsika ny hanaiky azy io ho toy ny tranobe Gaudí, satria izy io dia tsotra lavitra noho ny asany hafa. Namboarina mba hipetrahan'ny foiben-toeran'ny orinasa mpamokatra lamba io fa ankehitriny ampiasaina amin'ny Caja de España any León.
Convent an'i San Marcos
Iray amin'ireo Firavaka firafitra Leonese miaraka amin'ny katedraly. Izy io dia trano tsara tarehy izay noforonina ho hopitaly ho an'ny mpitety fivahinianana tany am-piandohana, nefa taty aoriana dia lasa trano fivarotana ary na dia tranomaizina nitoeran'i Quevedo aza. Amin'izao fotoana izao dia trano fandraisam-bahiny dimy kintana ho an'ireo izay te-hijanona ao. Tamin'ny taonjato faha-XNUMX no nanomboka ny asa tamin'ity tranobe ity, nandrava ny hopitaly teo aloha izay tsy dia tsara loatra. Androany dia iray amin'ireo tsangambato lehibe indrindra amin'ny Renaissance Espaniola.
Fiangonana Collegiate of San Isidoro
Monasitera natokana ho an'i San Pelayo ity fiangonana ity. Androany dia basilica tamin'ny taonjato faha-XNUMX amin'ny endrika Romanesque izay mijoro eo akaikin'ny sisa tavela amin'ny rindrina taloha. Afaka mitsidika toerana isan-karazany ianao ao anatin'ny fiangonana an-tsekoly. ny Pantheon of the Kings no toerana nandevenana ireo mpanjaka nandritra ny Moyen Âge. Ny crypt dia toerana tena tsara tarehy misy vaultes voaravaka fresco izay mitantara seho isan-karazany. Ao amin'ny fiangonana mpiara-mianatra dia afaka mahita ihany koa ny zaridaina Romanesque tranainy indrindra any Espana. Toerana hafa hitantsika ato amin'ity fiangonana mpiara-mianatra ity ny tranomboky Renaissance, ny haren'ireo mpanjaka na ny efitranon'ny kalisy miaraka amin'ny hazon'i Doña Urraca.
Raha tianao ny zavakanto dia tsy azonao atao ny tsy mahita an'io Tranombakoky ny kanto ankehitriny an'ny Castilla y León. Ny fisehony dia azo antoka fa hisarika ny sainao na dia tsy fantatrao aza izany, satria misy takelaka misy loko rehetra izy. Tsy lafo ny fidirana ary afaka mankafy zavakanto maoderina amin'ny trano iray miavaka isika. Aorian'ireo tsangambato taloha any León dia fanovana ara-javakanto izay mety ho tadiavintsika izany.
La Plaza Ben'ny tanàna dia toerana afovoany ahafahantsika mankafy fitsaharana kely. Misy bar, atmosfera ary terraces, satria akaikin'ny Barrio Húmedo fanta-daza izy io. Eto amin'ity kianja ity isika dia afaka mahita tranobe taloha ary misotro mandritra ny fitsaharanay amin'ny fitsidihana ny tanàna. Ny toerana mety indrindra hankafizanao ny fikasahan'ny tanàna taloha rehefa manandrana ny tapasany ianao.
Ilay toerana azonao atao mankafy ny gastr gastrikan'i LeónHo an'ny zava-pisotro mamelombelona miaraka amina tapas sy ny rivotra iainana tsara indrindra dia ny Barrio Húmedo, na dia tsy maintsy miresaka momba ny Barrio Romántico ihany koa isika. Ny lovantsofina dia milaza amintsika fa tsy maintsy manana divay vitsivitsy ianao ary manandrana fohifohy vitsivitsy manandrana ny sasany amin'ireo papiasa arosony ho antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » León » Inona no ho hita ao León
Ny Nosy Marshall, toerana itodiana any Pasifika